वडाध्यक्षहरु नै नआएपछि कार्यालय सुनसान ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
वडाध्यक्षहरु नै नआएपछि कार्यालय सुनसान !
केशवराज भण्डारी, झापा, १ पुस, वडाध्यक्षहरु वडा कार्यालयमा जानछाडेपछि हल्दिवारी गाउँपालिका अन्तरगतका वडा कार्यालयहरु सुनसान देखिएका छन् । वडाध्यक्षहरु कार्यालयमा उपस्थित हुँदा बिहान साढे १०÷११ बजेदेखि तीनबजेसम्म कामको चाप हुने गरेका कार्यालय अहिले सुनसान छन् । वडाध्यक्षहरु वडामा नआएपछि वडामा कार्यरत कर्मचारीहरु अलमलमा पर्नुका साथै फुर्सदिला बनेका छन् भने सेवाग्राहीहरु पनि प्रभावित बनेका छन् ।
वडाध्यक्षको अधिकार गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै हल्दिवारी गाउँपालिका अन्तरगतका ५ वटै वडाका वडाध्यक्षहरु गत मंसीर १९ गतेदेखि नै वडा कार्यालय गएका छैनन् । यद्यपि नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा कार्यालय परिसर बाहिरबाटै दिइदै आएको हल्दिवारी वडा नं.–२ का एक कर्मचारीले जानकारी दिए । नाम गोप्य राख्ने शर्तमा वडाध्यक्ष कार्यालय नआए पनि सेवाबाट बञ्चित नगरेको तर, सेवाग्राहीहरु नै कम आउने गरेको उनले बताए ।
गाउँपालिकाले वडाध्यक्षको अधिकार हडपेपछि सेवा दिन आफूहरुलाई असहज भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोही विरोधमा एक भएका सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षहरुले गत मंसीर १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म कार्यालयमा नफर्कने जनाएका थिए । विज्ञप्ति जारी गरेको ११ दिन बितिसक्दा पनि समस्या समाधानमा गाउँपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको वडाध्यक्षहरुले बताएका छन् । यसबाट हल्दिवारी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडावासीहरु विचल्लीमा मात्र परेका छैनन् जनप्रतिनिधिहरु प्रतिको विश्वास गुम्न सक्ने पनि देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: 2018-12-16 2018-12-16 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged जनप्रतिनिधि झापा हल्दिबारी गाउँपालिका
इपिएल क्रिकेट : ललितपुरसँग भैरहवा पराजित
‘दुई अध्यक्ष संसारकै नमूना !’
Tags: जनप्रतिनिधि, झापा, हल्दिबारी गाउँपालिका